ရုံးသို့လာရောက်သော ဧည့်သည်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားပေးခြင်း ။ ရုံးဖုန်းများအား လက်ခံနားထောင် ၊ ဖြေဆိုခြင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ။ - ရုံးစာဝင်/စာထွက်များ လက်ခံခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ။ - ဝန်ထမ်းများ သိရှိရန်လိုအပ်သော သတင်းစကားများအား ဝန်ထမ်းများထံ မှန်ကန်စွာနှင့် အချိန်နှင့် တပြေးညီသိရှိစေရန် အကြောင်းကြားပေးခြင်း ။ ရုံးတွင်း ထွက်စာများအား ဝန်ထမ်းများ သိရှိစေရန် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း ။ ဝန်ထမ်းများ၏ နေ့စဉ် ရုံးတက်/ရုံးဆင်းမှတ်တမ်းများအား စီစဉ်ပေးခြင်း ၊ စီစစ်ပေးခြင်း ။ အခြားသော Office Staff ၏ အခြေခံလုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ။
အကျိုးအမြတ်: - Meal Provide - Transportation Provide
တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပြူတာအခြေခံအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး၊အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Receptionist/ Office Staff
. Customerဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ကုမ္ပဏီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေဆိုရမည်။ . Customerများနှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပြီး ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ . ငွေပေးချေမှုအတွက် ပြေစာများကို ပြင်ဆင်ပါ။ . ရုံးသုံးငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ကြီးကြပ်ရမည်။
ဧည့်သည်များကို လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဖြင့် နှုတ်ဆက်ကာ ဖြေကြားခြင်း သို့မဟုတ် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကြိုဆိုပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုက်နာခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု မှတ်တမ်းစာအုပ် နှင့် ဧည့်သည် တံဆိပ်များ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်း နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဧည့်သည်များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းပါ အိမ်ဖုန်းနှင့် ကွန်ဆိုးလ်လည်ပတ်မှုအတွက် အဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အား ထိန်းသိမ်းပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဥ်းများနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လုံခြုံပြီး သန့်ရှင်းသော ဧည့်ခံဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းပါ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မမှန်မကန် နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အဖွဲ့များကြားတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းပါ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ဆက်စပ်ရလဒ်များကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေခြင်းဖြင့် အသင်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် ပံ့ပိုးကူညီရမည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ လိုအပ်သည့် အခြားဆက်စပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပါ။ မတော်တဆမှုများ နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာ နှင့်/သို့မဟုတ် အထွေထွေမန်နေဂျာများထံ တိုင်ကြားဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမန်နေဂျာ နှင့်/သို့မဟုတ် အထွေထွေမန်နေဂျာများထံ အစီရင်ခံရန် (သို့) ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
တယ်လီဖုန်း အဝင်အထွက် ခေါ်ဆိုမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ ဖုန်းလိုင်းများ ကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမည်။ လစဉ် မီတာဘေလ်များ၊ ဖုန်းဘေလ်များ၊ အင်တာနက်ဘေလ်များ ပေးဆောင်ခြင်းများကိုးပြုလုပ်ရမည်။ လစဉ် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများနှင့် လုံခြုံရေး အစားအစာများ ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စများလုပ်ဆောင်ရမည်။ စာများနှင့် ပါဆယ်ထုပ်များကဲ့သိုသော အဝင်အထွက်စာရွက်စာတမ်းများကို စာရင်းပြုစု ထိန်းသိမ်းရမည်။ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများ၊ သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များဝယ်ယူသည့်စာရင်းကို ထိန်းသိမ်းရမည်။ လစဉ်မီတာဘေလ်များ၊ ဖုန်းဘေလ်များ၊ အင်တာနက်ဘေလ်များ မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။ နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်မှုနှင့်ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် Secretary အား လိုအပ် လျင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဌာန မန်နေဂျားမှ ပေးအပ်သော အခြားတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: -Ferry Provided -Yearly Bonus
တင်သောနေ့: 22 Jun 2022